Ziyaqonga izikhalo ngohlelo Uyajola 9/9
UMOSS Mokwati, okunguye owayethula uhlelo oluthi Uyajola 9/9 ngesonto eledlule Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | October 7, 2019
LUZULELWA ngamanqe uhlelo olusakazwa esiteshini sethelevishini kuMoja Love ngeSonto, kusukela ngo-9 ebusuku, i-Uyajola 9/9 njengoba sanda isibalo sabantu abafuna luvalwe.
Nenhlangano ebhekele ubulungiswa kokusakazwa kwithelevishini nasemisakazweni, iBroadcasting Complaints Commission of SA (BCCSA) ikuqinisile ukuthi ithole inqwaba yezikhalazo ngalolu hlelo. Ababukeli bakhala ngokuhlambalaza okungabekezeleleki, yinhlamba nodlame.
Yize sekunesikhathi kunezikhalo ngalolu hlelo oluphenya ngabasuke bengathembekile kwabathandana nabo, ukuze bababambe oqotsheni kodwa umkhankaso uqine kakhulu ngemuva kweziqephu zangeSonto eledlule, lapho kubonakale abesifazane ababili bembhonya aze abe mabokoboko othandana nabo. Kubantu abakhale ngalolu hlelo kubalwa nonontandakubukwa wakuleli, uSomizi Mhlongo, oze wabhala ezinkundleni zokuxhumana ekhala ngokwenzelela kwabaqaphi uma kukhona oshaywayo.
“Singaqinisa ukuthi sizitholile izikhalalo, okwamanje ngeke siphawule kakhulu, sisalandela,” kusho uShoeneez Martin okhulumela iBCCSA.
Nesikhulu sakwaMultiChoice Group, uJoe Heshu, sithe bazitholile izikhalo zakwaBCCSA mayelana nesiqephu sakamuva se-Uyajola 9/9. “Yize singeke silawule izinhlelo zesiteshi naso esizimele esinemigomo yaso. Sisaxoxa nabalesi siteshi ngalesi sikhalo futhi sizophendula ngendlela kwiBCCSA,” kusho uHeshu.
Kubuzwa okhulumela iMoja Love, uLindiwe Mbonambi, ucele ukuthunyelwa imibuzo nge-email. Kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela engabuyelile entatheleni. Ekhuluma neSolezwe phakathi nesonto ngesiqephu sangesonto eledlule uthe kwesinye isikhathi kuba nzima ukunqanda udlame ngoba amaphaphu asuke esephezulu kubantu abeze ohlelweni.
Isolezwe ngoMgqibelo lithole ukuthi sekunohlu lwabantu abangaphezu kuka-8700 abangababukeli balolu hlelo kungakapheli ngisho isonto lusakaziwe. Lolu hlelo olususelwe kolwase-USA, oluthi Cheaters futhi olwethulwa kuleli ngumrepha uMoss Mokwati wodumo lweNo Excuse Pay Papgeld nomrepha uMolemo “Jub Jub” Maarohanye, luqale ukususa umsindo ngesikhathi luqala ngoMeyi nonyaka.
Abashayela uhlelo bathola isikhalo, base belandela okusolwa ukuthi uyajola ukuze bambambe oqotsheni nalowo osuke ethi ubhangqiwe.